MAMANTATRA NY SAINA LALIN’ANDRIAMANITRA! – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 septembre 4, 2015 Laisser un commentaire sur MAMANTATRA NY SAINA LALIN’ANDRIAMANITRA!
« Fa isika tsy nandray ny fanahin’izao tontolo izao, fa ny Fanahy izay avy amin’Andriamanitra, mba ho fantantsika izay zavatra nomen’Andriamanitra antsika. » I Kor 2:12
– Ny fanahin’izao tontolo izao:
Manana ny fanahy izay ao anatiny tsirairay avy ny olona, kanefa io fanahy io dia mamantatra ny ao ampon’ny olona ihany. Voafetra ny azon’ny fanahin’izao tontolo izao fantarina. Ny olona dia nomen’Andriamanitra maso, sofina, lela… mba ahazoan’ny olona mamantatra ny manodidina azy, na ny olona tahaka azy ihany koa. Ny manahirana anefa, dia mamitaka izany famantarana na fomba fijery na fomba fihainoana izany ka mitarika ny olona hanana hevi-diso ny amin’ny namany tahaka azy, na ny zava-miseho andavanandro eo amin’ny fiainany koa. Voan’ny hevi-diso ireto olona nahita an’ilay lehilahy teraka jamba nositranin’i Jesosy; ny nitarika azy mantsy dia ny fanahin’izao tontolo izao ka izay ao am-pony ihany no fantany. Hoy tokoa mantsy ireo efa mahalala fa « Mosesy dia nitenen’Andriamanitra », fa ny amin’i Jesosy dia tsy fantany izay nihaviany. Toa ny fanahin’izao tontolo izao tao amin’ireto lehilahy teraka jamba ireto no fanahy miasa eo amin’izao tontolo izao ka na dia Jesosy Ilay zanak’Andriamanitra velona aza tsy fantany.
– Ny Fanahy izay avy amin’Andriamanitra:
Raha dinihina ny tantara mikasika ilay teraka jamba nositranin’i Jesosy dia jamba tokoa izy teo aloha fa nahiratra Izy noho ny asa fanasitranana nataon’i Jesosy, fa tsy ny masony ihany no nahiratra fa ny fanahiny koa satria dia nahafantatra an’i Jesosy Izy. Tena samy hafa ny fanahy niasa teo amin’ity jamba sitrana ity sy ireo lehilahy nanevateva azy. Na dia ny lelan’ireto olona ireto aza dia nentiny nandavoana ny namany, ary nanaratsiana na dia ny Zanak’Andriamanitra aza. Ny an’ilay lehilahy jamba sitrana kosa, na dia ny masony vao nahiratra aza dia nahitany an’i Jesosy Ilay Zanak’Andriamanitra, ny lelany dia nentiny nanaovana fanekempinoana an’Andriamanitra: « Tompoko, mino aho ».
Ianao koa anio, raha hihaino ny feony ianao, dia raiso ny Fanahy avy amin’Andriamanitra, mba ahazohanao mamantatra ny saina lalina izay an’Andriamanitra, ka na ny lelanao, na ny masonao, na izay momba anao rehetra dia entinao midera an’Andriamanitra, ary hitenenao koa hoe: Tompoko, mino aho.
Ny Tompo hampahery anao!
Publié parfilazantsaramada septembre 4, 2015 Publié dansUncategorized